Ny HMD Global dia mandefa ny Nokia 6 any Shina | Vaovao momba ny gadget
Izahay no nitondra taona maro nanonofy mahafinaritra afaka manana indray andro any smartphone Nokia amin'ny Android. Io marika nanjavozavo avy amin'ny Microsoft io izay tsy afaka nampiasa ny fifandraisany tamin'ny taona lasa, nanjary nitebiteby rehefa nandeha ny fotoana ary toa afaka hametraka fotsy sy madio indray io Android amin'ny finday vaovao io.
Androany izany rehefa tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo, ny HMD Global dia natomboka manokana ny Nokia 6 any Shina. Ny orinasa manana ny zon'ny marika dia efa manana ity smartphone ity amin'ny tsena mahomby toa ny sinoa, izay atolotry ny JD.com amin'ny vidiny $ 245 ho an'ny terminal iray miaraka amina endrika manokana.
Ny HMD Global dia mirehareha amin'ny fizotran'ny famokarana Nokia 6 amin'ny maha-izy azy ahitana ny sakana aluminium Andiany 6000 ary mahazoa dingana fampifangaroana roa manokana izay maharitra 10 ora mahery vao vita. Ny valiny farany dia vatana aluminium izay avo indrindra amin'ny kalitaon'ny rafitra sy ny fahitana.
Saingy satria miahy ny momba ny fitaovana ihany koa izahay dia manolotra a Nokia 6 Efijery Full HD 5,5 mirefy miaraka amin'ny vera miolaka 2.5D, puce Snapdragon 430, RAM 4 GB, fitehirizana anatiny 64GB, slot microSD, fifandraisana SIM Dual, fakan-tsary 16 MP ao aoriana miaraka amin'ny PDAF, feo Dolby Atmos miaraka amina mpandahateny stereo, Bluetooth 4.1, LTE, 3.000 mAh bateria sy sensor an'ny tanan-tànana. Ny kinova rindrambaiko dia Android 7.0 Nougat.
Ny antony nandefasan'ny HMD Global manokana an'ity telefaona ity tany Sina dia noho ny 552 an-tapitrisany mpampiasa miaraka amin'ny smartphone, manao azy ho tsena stratejika lehibe ho an'ity orinasa ity. Na izany na tsy izany, mandritra ny taona dia ho hitantsika izany finday Nokia enina samihafa hatramin'ny 6 navotsotra, ka hataontsika ho an'ny rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ity no finday Nokia voalohany misy Android, ny Nokia 6